Ngubani Mark Rudinshtein? Kuyinto owaziwa filmmaker, umkhiqizi kanye umlingisi. 2016 waba unyaka wejubili ngaye - lo muntu omkhulu iminyaka engu-70 ubudala. A isikhathi eside, futhi phakathi naleso Rudinshtein kwadingeka isikhathi ukwenza okuningi. Waphenduka ubaba ekusungulweni omunye wemizila ebaluleke kakhulu imikhosi ifilimu in Russia, wathola isihloko Ezigcwalisiwe Art esiyiNgcweti, wafaka izithombe ezimbalwa nenomakhanya ezihlukahlukene izindima ngokwakho. Futhi wakwazi ukuxabana cishe yonke kinobratiey emva Umlando ihlazo.
Ngaphezu kwalokho, Rudinshtein uMarku, ogama biography kuzoxoxwa ngakho esihlokweni - Odessa umoya. Akalokothi at uzothini futhi kungaba amanga eziningi zokuphila kwakhe, ngokuvamile udangele, kodwa ngaso sonke isikhathi uThandeka behlakaniphile.
Rudinshtein Mark: Biography. Esakhula
Rudinshtein kwakuyizingane ezingaphansi ku eminyakeni enzima post-yimpi, nalapho leliya lizwe lase liqala nje ukuthola ukusuka impi yaba mibi kakhulu. Mark wazalelwa e-Odessa kuya emkhayeni wamaJuda. Lena umsuka cishe kwaholela umlingisi oseza okungalungile ithrekhi lezigelekeqe.
Esikoleni, phakathi kwabafundi wayenguKristu omele ematheni isizwe samaJuda, futhi ngenxa yalokho njalo ngaphansi ukuhlaselwa ontanga yabo. Lapho esikoleni, lapho yafunda Mark kancane, kwafika nomunye umntwana kusukela emkhayeni wamaJuda, uyovele ube nabangane. Indlela engcono kakhulu ukuvikela, njengoba yaziwa, kuhlasela, akumangalisi ukuthi lezi guys ezimbili seziye zaphenduka iqoqo lezigilamkhuba kancane. Omunye izibhelu yaphela ukulwa nge sigameko. Ngenxa yalokho, Rudinshtein abasha hit koloni yezingane.
Obaba and Sons
Ngemva kwesikhathi esithile ejele, uyise ka-Marku ukumsiza athole ushwele. Njengoba Uyakhumbula Rudinshtein ukwenza kanjalo umzali owawukhuluma nabo ngaphambili, kodwa abazange, ucabangela isijeziso indlela enhle kakhulu imfundo. Indodana yaleli Nokho, akuyona baziswa futhi ngokushesha ngemva kokukhululwa wasuka Odessa lwakhe lwendabuko, Nikolaev.
Ngokuvamile, kuyafaneleka ukuthi ubuhlobo sha umzali ibilokhu ixubene. Ngo Umlando lakhe, uMarku ngokuvamile kusho izinto akulona nice kakhulu uyise. Nokho, njengoba isikhathi lubonise Rudinshtein Jr. okuthukelayo asindiswe ingxoxo.
G., Izrailevich noma Kasrylevich
Rudinshtein ukubizwa Kerin, kodwa i-passport umkhiqizi sinika ngempela igama elehlukile phakathi - Izrailevich. Kuyinto, igama ngokungagwegwesi isiHebheru wazala uyise. Futhi kuze kube iminyaka engu-21, u-Mark babengazifihli igama likayise. Nokho, konke kwashintsha ngo-1967, lapho kwakukhona empini ka-Israyeli neSiriya, ukuze ngokuphelele ukushintsha isimo sengqondo nombuso wamaJuda ngaphansi kweSoviet Union. Rudinshtein uMarku, ogama lakhe langempela uMarku Izrailevich patronymic, kulokhu njengoba isikhathi waba yisosha. Ungacabanga ukuthi izikhathi ezinzima unegama phakathi, okuyinto ngokuzumayo usuphenduke into efanayo isitha. Ngakho wabizwa Grigorevichem, usebenzisa igama kumkhulu wakhe. Kancane kancane mayelana igama lakhe langempela phakathi ukhohliwe, nakuba passport samanje Mark Rudinshtein igama phakathi awushintshanga.
Into funny kakhulu uwukuthi Rudinshtein ezinhle kwakufanele ekhonjiwe Konstantinovich noma, kule nguqulo yamaJuda, Kasrylevichem. It is ngakho okuthiwa lokuzalwa kukayise. Nokho, ngemva entshisekweni elihlobene ne-ukudalwa nombuso wakwa-Israyeli, Rudinshtein Sr. ushintshe igama.
umakhi womkhumbi Yehlulekile futhi umfundi okuphakade
Ngemva kokuthuthela e-engu-15 e Nikolaev, uMarku wathola umsebenzi ngesikhathi ngisemsebenzini. Kwaphela isikhathi eside ukuthi wayekhona, Nokho, angizange wasebenza - yaqaphela ngesikhathi ukuthi okukhethekile ukusebenza - hhayi ubizo lakhe. Ngakho-ke, ngemva nje impi, wathuthela eMoscow, lapho wabhalisa GITIS.
Graduate ekolishi yaseshashalazini is ke, ngeshwa, akazange inikezwe - futhi uvikelwe izimpande abangamaJuda. Ngase ukuza ehhovisi itoho Shchukin. Ngemva kokuthola iziqu, Rudinshtein ngahileleka inhlangano amakhonsathi ka izinkanyezi umculo Soviet, waba umqondisi we Ensemble vocal-wezinsimbi "Sawubona ingoma!".
Imisebenzi "Rosconcert" Ngakolunye uhlangothi, kakhulu amathalenta kwambulwe Rudinshtein kanjani umcimbi abahleli ezihlakaniphile. Futhi ngakolunye - umphumela esitokisini.
In the 80s ekuseni yaqala okunye ukuzingelwa uyathakatha - noma ubani owenza umzamo ngesikhathi umsebenzi ezimele kwezomnotho sasivunyelwa ukuba inkathi eside. Futhi Rudinshtein Bathi kwaba phansi kwesandla. Waboshwa kabi izimali kwempahla isimo. Isimo engangibhekene naso ngokungagwegwesi okungenangqondo - ayazi kahle ukuthi ukuhola "Rosconcert" kwadingeka achithe imali ukuthuthwa imishini Iinhlangano lokuzijabulisa izenzakalo, ngokuvamile kwenziwa ngezindlela eziningi ukundlula esemthethweni. Kodwa abenzi bokubi namanje yanquma ukuthola.
Rudinshtein engu 6 Nokho, ejele, wachitha isikhathi esingangonyaka - emva liqulwe kabusha yena utholwe. Nokho, izinkumbulo izinsuku ejele, isibe omunye ezingemnandi kakhulu ekuphileni kwakhe.
Ngisho ku izinsuku wachitha ngivalelwe, Rudinshtein uthi umuzwa wakhe isici amahlaya. Nakuba gay ngalezo zinsuku kwakungenele. UMarku kwadingeka abakhulelwe bachitha izinyanga e eyeseli wawugcwala kakhulu, lapho awazange kuphela abatholwe benecala "kwezomnotho" abantu iphepha, kodwa izigebengu zangempela. Ngezindlela eziningi kwasiza ajwayelane izinkanyezi, ayekwazi ukutshela izindaba ezithakazelisayo.
Kodwa abesabekayo kakhulu Rudinshtein kwaba ukuhumusha ejele, lapho yena waba umakhelwane kuphela ekamelweni kwaba owayenguNgqongqoshe Ezokuthutha Kazakhstan. Ngokwe-Umlando likaMarku usuku esibi kunazo zonke ekuphileni kwakhe kwaba uNcibijane 1987, unyaka lapho isiboshwa zonke ebusuku ukusakaza Umsakazo kusuka eMoscow Red Square, lapho abantu babe fun.
Rudinshtein bacishe bahlukana wawisa ezandleni zakhe. Yena wahlaselwa yisifo senhliziyo. Futhi kuphela ngosizo lwabangane phakathi kwabo kwakukhona kobzon, emvimba isicelo sokuthi leli cala liphindele. Ukuze yokushoda kobufakazi ukhululiwe Rudinshtein.
Lapho ededelwa, Rudinshtein baqhubeka amakhonsathi bakhe inhlangano. Ngenhlanhla, ngalesi sikhathi sezinguquko waqala ezweni, futhi wakwazi ukusebenzisa umthambo bakhe beqiniso Jewish commercial kakade ngaphandle kokwesaba.
Ngakho, Marco baba umhleli we edume rock ekhonsathini e Podolsk ngo-1987, owayebizwa ngokuthi okulingana yaseSoviet yokuthuthela Woodstock.
Kamuva Rudinshtein adumileyo wathenga amalungelo ifilimu "Intergirl", okusho ezikhathini ukuhlelwa kabusha isibe yisakhiwo sodumo ngempela. Lokhu kuthenga alethwe Mark inzuzo ehlonipheke kakhulu, kodwa omunye crisis okwalandela wachitha cishe yikho konke ababenakho.
Rudinshtein Mark izithombe ozibona iphepha, wahola imisebenzi ezinzima kakhulu yenhlangano, kodwa umnikelo wakhe eziyinhloko sphere kwamasiko kwaba ukudalwa omunye imikhosi enkulu yezwe manje.
Ngo-1990, uMark wabaholela ngesisekelo yokuzilibazisa isikhungo "Moscow", uye wahlela umkhosi cinema Russian, okuyinto ndawonye kwethulwa phambi tape, lapho umthengi ayitholakali. Won emikhosini ifilimu, by the way, "Die qinani, vuka!", Bese bekhuluma Cannes ngempumelelo.
Nokho, nomkhosi eduze eMoscow baba sibonelo ngoba elikhulu, owaziwa ifilimu iforamu. Ngo-1991, e-Sochi, sibonga imizamo Rudinshtein, kwaqhutshwa "Kinotavr" kuqala. Lo mkhosi lakhunjulwa hhayi kuphela njengoba ukubuyekeza ezinhle ebhayisikobho kazwelonke, kodwa futhi njengoba indawo eceleni eziningi movie stars, kokubili Russian angaphandle.
Ngemva kweminyaka eminingi njengendlela producer "Kinotavr" Rudinshtein ukhathele umsebenzi esindayo yenhlangano, wesula futhi ithengiswe amalungelo ukuziphatha kwakhe.
Rudinshtein Mark - Producer, actor
Ngemva kokuthola iziqu Shchukin Theatre School "kusho lowo oyibamba" Marku wenza amafilimu ngokuphindaphindiwe. Nokho, Uvuma ngobuqotho ukuthi wenza ithalente akayena enkulu, kodwa ngoba iningi izindima zakhe - episodic. Ngenxa charm ukuthungwa, izindima zayo ezincane cishe base njalo egqamile futhi emnandi. Nokho, ephezulu iphrofayela movie cishe wayengekho umsebenzi wakhe.
Iqhaza lokuqala wayedlala ngo-1992 ifilimu "umoya omfushane uthando", okuyinto okufanayo futhi ekhiqizwa yena. Futhi ngo-1995 wadlala indima yakhe yokuqala enkulu - ". Pioneer Mary Pickford" a umsebenzi e-movie
Mark Rudinshtein, Filmography njengamanje has ngaphezu imidwebo kweshumi, udlala, izindima ikakhulukazi ezincane. Isenzakalo esidume kunazo zonke kubo - "Woza Bheka ngami." Rudinshtein futhi wavela kaningi ochungechungeni, enye yazo - "Holiday romance" - yena wadlala indima enkulu. imidwebo emithathu ekuqaleni '90s wenza njengendlela producer.
Okwamanje Kerin isebenza IBamba qembu we "Theatre of the Moon" ngaphansi kokuqondisa Sergeya Prohanova. Lapha Rudinshtein sizindle ngenjabulo ithuba lokudlala indima encane ukusebenza, ukungakwazi inkanyezi enkulu.
Ngubani Mark Rudinshtein? Izithombe ngale ndoda ephawulekayo oyibona kulesi sihloko. Njengabantu abaningi abadumile, Rudinshtein ithole impumelelo okuxubile kakhulu. Futhi isizathu ukuthi - ngezambulo ihlazo ukuthi ngo-2010 emenza komsindo emaphephandabeni.
Kerin njalo kunalokho uyangabaza abantu. Dialogue nge inani elikhulu abadlali abadumile zamnika ithuba ukubona zonke ohlangothini seamy umbukiso kwebhizinisi kanye nezwe isiko. Ungaba umlingisi omkhulu, kodwa umuntu ezinjengendle - ukuze ukwazi elichaza isimo sakhe sengqondo ukuze osaziwayo abaningi.
Futhi Umlando wakhe Rudinshtein engawayekanga ubani. Futhi got a abdulov enkulu nge Jankowski. Ngemva kwalokho Rudinshtein kwadingeka ngisho ukuxolisa umndeni Jankowski.
Nehlazo waqala lapho kukhululwa incwadi ngcaphuno e kwenye yezincwadi. Lokhu kwalandelwa ngokudubula ekudluliselweni at Malakhov, kodwa wayengazi ngakho egcwele imininingwane salacious ezingenziwanga senza. Kwaphela isikhathi eside, futhi okukhiphayo Umlando ngokwabo kwaba nombuzo obalulekile, kodwa manje ingatholakala inethiwekhi yalo msebenzi.
Abantu abaningi basalokhu bengakakwazi ukuthethelela Mark Grigorievich ukuthi ayivulanga izici emnandi kunazo zonke ekuphileni kwesikrini izithombe. Ukuze udumo we Rudinshtein, kufanele kuphawulwe ukuthi maqondana yena ngokuvamile Akazisoli anokugxeka futhi bathande ukubhuqa.
Nokho, ubudlelwane abanobuntu ngabanye yisakhiwo sodumo cinema Russian lonakele eside ngaphambi kokukhululwa kwe Umlando.
Ngakho, siyazi mayelana ezingqubuzana banengeke Rudinshtein Nikitoy Mihalkovym. Ngu-Mark G. uyazicabangela kulezi ubudlelwane nobutha Mikhalkov ungathandi amaJuda. Ngaphezu kwalokho, Mikhalkov, njengoba umkhiqizo isimiso samaSoviet has, kusobala ephikisana nenkululeko futhi umoya ebhizinisi, okubonisa Rudenshteyn.
Ngesikhathi esifanayo nomfowabo Mikhalkov, Konchalovsky, Mark G. ukulondoloza ubuhlobo evamile. By the way, sibonga umqondisi Rudinshtein wahlangana nenkosikazi yakhe ephakeme yesikhathi esizayo, Yuliey Vysotskoy.
Imvelo asebenzayo umthelela Kerin sika ngempilo yakhe yangasese. Kathathu eseshadile, kodwa ubuhlobo unomphela wayengakwazi. Njengoba waphawula, njalo eminyakeni 16, indoda liyadingeka ukonakala, igazi elisha namandla amasha.
Ngaphezu ubudlelwane esisemthethweni, ngesikhathi Rudinshtein kwaba umlando engavamile we ubuhlobo nentombazane ngokuthi yena "Intergirl". Ngezindlela eziningi, le ndaba Ilandiswa NguMark G., okusikhumbuza esiqintini ifilimu, kuhlanganisa ukuqaliswa Heroine nge ngumuntu wakwelinye izwe.
Imphilo lephilwe awulona ize
Naphezu uchungechunge amahlazo, Mark Rudinshtein, amaqiniso ezithakazelisayo lapho kwethulwa phambi ukunakwa kwakho kulesi sihloko siyaqhubeka ematasa emkhakheni kwamasiko. Udlala yaseshashalazini, kuyinto mdlalo we-TV mayelana movie. Ngo-2003 wathola isihloko ahlonishwe Art esiyiNgcweti, okubhekiselwa kulo ngokuthi isakhamuzi zokuhlonipha Odessa lwakubo. Yebo, uJesu wayevame uthi ngokuzwakalayo lokho bekuyodingeka ukuze bathule, kodwa lokhu izinga bekulokhu esingokwemvelo njalo e-Odessa. Futhi iminyaka yakhe engu-70, azenzile ngokwanele ukuba ucabange ukuthi lokhu kuphila akubanga yize.
Umlingisikazi ULyudmila Marchenko biography, empilweni yakho, i-Filmography
Tom Hiddleston - umlingisi British. Loki e "The Avengers" - Tom Hiddleston (isithombe)
Carnage ( "Marvel") - ngubani?
Indlela ukupheka metal Welding kagesi noma inverter? efanele Welding inqubo
Anticoagulant "Ksarelto": yokusetshenziswa, kanye nencazelo
Highlander inyoka (Poligonum bistorta L.)